ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာအပဆမ်များ | တိုယိုတာအပဆမ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Estate Car (41)
A/C: Front (10)
Lks 247 ညှိနှိုင်း
Lks 210 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Ipsum 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Ipsum 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Toyota Ipsum U 2001
Grey Toyota Ipsum U 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Toyota Ipsum I 2002
Silver Toyota Ipsum I 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Ipsum 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Ipsum 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 255 ညှိနှိုင်း
Toyota Ipsum 240U 2002
Silver Toyota Ipsum 240U 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Silver Toyota Ipsum 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 212 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Ipsum 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Lks 214 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Ipsum 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airba...
Black Toyota Ipsum 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Ipsum 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 213 ညှိနှိုင်း
Lks 203 ညှိနှိုင်း
Lks 239 ညှိနှိုင်း
Lks 233 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Ipsum 2002 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ???????????...
Red Toyota Ipsum 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 263 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Ipsum 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Toyota Ipsum 240S 2006
Pearl white Toyota Ipsum 240S 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်း...
တိုယိုတာ အပဆမ် များ
တိုယိုတာ အပဆမ်များဟာ တိုယိုတာ မီနီဗန်အမျိုးအစားထဲက ပြည်တွင်းမှာ လူစီးများတဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်နဲ့ အခြား ဆီဒင်နဲ့ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွေထက် စာလျှင် အနည်းငယ် ကိုယ်ထည် ပိုရှည်လျားတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကား အတွင်းမှာ ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း လူစီးနိုင်တဲ့အတွက် မိသားစု စီးကားတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဌင်းကဲ့သို့အခြား ၇ ယောက်စီး ကားတွေလည်း တိုယိုတာ က ထုတ်ပါတယ်။ ပစ်ကနစ်၊ စပေါ့စ်ဗန်၊ အေဗန်စစ် ဗာဆို စတဲ့ ကားအမျိုးအစားကွဲတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၅ ပနေ ၂၀၀၉ ထိ ထုတ်နေတာပါ။ မြောက် အမေရိကမှာတော့ မထုတ်ပါဘူး။ ဂျပန် ဈေးကွက်မှာပဲ ရောင်းချတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက် နှစ်ဆက်ရှိတဲ့ အထဲမှာ ပထမမျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၅ကနေ ၂၀၀၁ ထိ ထုတ်တဲ့ ပထမမျိုးဆက်ကို ဂျပန်ရဲ့ ကုန်တင်ပို့မှု ဈေးကွက်မှာ တွေ့ရပါမယ်။ အပဆမ် အပါအ၀င် ပစ်ကနစ်၊ စပေါ့ဗန်တွေကိုလည်း တွေ့ရပါမယ်။ ဌင်းတွင် အင်လိုင်း ဖိုး ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် နှစ်မျိုးထဲမှ ရွေးစရာရှိပြီး ၁၈၀၀ စီစီကနေ ၂၀၀၀ စီစီ နဲ့ ၂၂၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေကို တွေ့ရပါမယ်။
ပြည်တွင်း အတွေ့ရများဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၉ မော်ဒယ် ဒုတိယမျိုးဆက်မှာတော့ ၂၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်၊ ၂၄၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ်ထည်ကြီးမားမှုနဲ့အညီ အင်ဂျင်ကို ကိုက်ညီစွာ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ နည်းတူစွာ အပဆမ်ကားတွေဟာ ကောင်းမွန်မှုတွေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်လိုင်း ဖိုး ဆလင်ဒါပါဝင်ပြီး 156,22 မြင်းကောင်ရေ အားကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မီနီ ဗန်ကား အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်သည့် နည်းတူစွာ ၂၀၀၁ နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အပဆမ်ကားတွေဟာ ဒီဇိုင်းဆန်းလာပါတယ်။ ကိုယ်ထည်အရှည်က ပုံမှန်ကားတွေထက် ပိုရှည်ပြီး သိပ်တော့ လူငယ်မဆန်ပါဘူး။ အတွင်းခန်း အနေနဲ့ ထိုင်ခုံ သုံးတန်းပါရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အပေါ်က ဆန်းရုတွေ ပါတဲ့ မော်ဒယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဂီယာဘောက်ကို ကား ဒတ်ရ်ှဘုတ်မှာ တပ်ပေးထားပါတယ်။ ထို အတွက် ဟန်း ဂီယာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ခန်းကိုလည်း ရှေ့မှာ ထိုင်ခုံ သုံးတန်း ဖြစ်သွားပေမဲ့ နေရာတစ်နေရာ ယူထားပေးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းက ဇိမ်ခံကား တစ်စီးနီးပါး အတိုင်း သန့်ပြန်တဲ့ ကာလာကို ထည့်ပေးထားပြီး ကျွန်းခွက် ဟိုင်းလိုက်တွေကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းများအနေနဲ့ ကာလာ ၀င်းဒိုးများ၊ အေဘီအစ် ဘရိတ်နဲ့ အပူအအေး ထိန်းချုပ်မှုစတဲ့ တစ်ခြား အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ နည်းပည်အဆင်မြင့်မားမှု တစ်ခုကို အပဆမ်တွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း နဲ့ ရရှိနိုင်မှု
ပြည်တွင်း ၀ယ်လိုအား များတဲ့ ဈေးကွက် တစ်ခုအနေနဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက် ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ မော်ဒယ် အထက်နားကို လူစီးများ၊ ၀ယ်ယူမှုများပါတယ်။ ၂၀၀၉ လောက်အထိပဲ ထွက်တဲ့အတွက် ဌင်း နှစ်အောက်ကို ပိုပြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၃ ကို ကျပ်သိန်း ၁၇၀ ၊ ၁၈၀ လောက်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကားဂရိတ် သန့်ရင် သန့်သလို ဈေးက မြောက်တက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် ဘရန်တွေကျတော့ ဈေးကြီးတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ မစီးကြပါဘူး။ များသောအားဖြင့် တစ်ပတ်ရစ်ကို သာ စီးကြပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကိုမှ ပြည်တွင်းမှာ စီးပြီး ပြန်ရောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဌင်း အနေအထားဆိုရင်တော့ ဈေးကို ပြန်ပြီး ထပ်မံ လျော့ရောင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် တိုယိုတာ အပဆမ်လေးတွေဟာ မိသားစုများတဲ့ လူနေ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် နေရာထိုင်ခင်း ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြင့် အဆင်ပြေစေမဲ့ကားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ အဲဖတ်လောက်လည်း အရွယ်အစား မကြီးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။